Sidee loo nadiifiyaa keydka oo loo soo ceshaa MBs-ka RAM | Laga soo bilaabo Linux
Imisa ayey ku dhacday inay bilaabaan inay furaan codsiyo, kumbiyuutarka ay adeegsadaan dhowr saacadood ka hor intaanay ogaan, waxay leeyihiin isticmaalka xad dhaafka ah ee RAM ... waa hagaag, halkan waxaan kuugu keenay xal u helidda dhibaatadan 😀
Waxay dhacdaa markaan furno codsiyo badan, markaan isticmaalno nidaamka in mudo ah, maktabadaha iyo waxyaabo kale oo kaladuwan ayaa kaydsan, laakiin ... waxaa jira waqtiyo aan si fudud ugu baahanahay RAM badan oo la heli karo, maktabadahaasina waxay nagu mashquuliyaan RAM iyaga oo aan xitaa weydiin. _¬
1. Waxaan fureynaa terminaal, dhexdiisa waxaan ku qoreynaa waxyaabaha soo socda oo aan riixnaa [Gali]:
Waxay na weydiin doontaa lambarkayaga sirta ah, waan qoreynaa oo riixnaa [Gali] markale.
2. Hadda waa inaan qornaa sidan:
Xaaladdayda, waxaan haystay qiyaastii 900MBs oo RAM ah, markii aan sidan sameeyayna waxaan u dhacay 700MBs, ma fiicna?
PD: Amarkan, maadaama ay sii deynayaan wax kasta oo ku raran keydka, waxay ka dhigi doonaan waxyaabo qaar ka mid ah meheradaheena wax lagu dilo waxoogaa gaabis ah, ugu yaraan ilaa ay mar kale ku ridaan keydka
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo nadiifiyo keydka loona soo cesho MBs-ka RAM
Aad baad ugu mahadsantahay tilmaamaha, aad u faa'iidada badan, Wax yar,
miyaanay noqon lahayn wax aan loo baahnayn? Waxaan ula jeedaa inay si toos ah uga fiicnaan laheyd:
Sababo jira awgood, sudo, sidaad sheegatay, aniga iima aysan shaqeysan ... taasi waa sababta marka hore aan u dejiyay inay ku soo galaan asalka (sudo su) ka dibna fuliyaan amarka.
Ma kuu shaqaysay sidaad u dhigtay?
Haddii aad aragto waxaad kaliya codsaneysaa sudo amarka koowaad. Si aad si sax ah u isticmaasho sudo waa inaad gelisaa -lo labada amar.
Waqti hore waxaan la halgamayay waxyaalahan. Xitaa adoo ku dhejinaya xigashooyin wax walba wali ma shaqeynayaan.
Mar alla markii aad dhigto sudo su, wax kasta oo kale ayaa si toos ah loogu samayn doonaa xidid ahaan 🙂
Hadda waxaan ku jiraa shaqada mana hubin karo, maadaama halkan aan ku isticmaalno daaqadaha.
Sikastaba, si aad u gasho superuser, kaliya
Isla markii aan guriga imid waxaan isku dayaa 🙂
Haddii aad suuub geliso tusaale ahaan Ubuntu, ma shaqeyn doonto mana awoodi doontid inaad gashid asal ahaan, uguyaraan waa siduu ahaa Lucid ... 🙂
taasi waa sababta oo ereyga sirta ah ee xididka lama qeexin.
sudo passwd oo qeex oo waxaad ku isticmaali kartaa "su" ubuntu ama wixii kale ee distoor ah
Ku jawaab roman77
Haa waan ogahay, laakiin ma qiyaasi kartaa sida tillaabooyinku ahaan doonaan markaa:
1. Beddel lambarka sirta ah
2. Orod kan kale.
Maaddaama aanan aqoon haha, waxaan u arkaa inay u fududaanayso adeegsadaha qaabkan 🙂
Ubuntu, Chakra iyo qaybinta kale waxay keenaan sudo loo habeeyay, Arch waa la qaabeyn karaa inta lagu jiro rakibida, Debian ma keento iyada oo la qaabeeyey, laakiin ma ahan wax adag in la sameeyo, shaqsiyan waan u bartay su.
Sida Eduar2 odhan lahaa
Halkaas ayaad ku kasbatay, inta badan isticmaalka hargabka su, duug ah
Laakiin akhristayaal badan oo na aqriyaa waxay adeegsadaan Linux Mint ama Ubuntu 😉
aan arko haddii aan si sax ah u fahmay ... waxaan sameynaa amarka oo keydka ayaa la sii daayaa. Kadib adoo sii wadaya isticmaalka barnaamijyadan khasnadda ayaa soo laaban doona ... haddaba ... maxaan ku guuleysaneynaa?
Jawaab Jorge Urdaneta
Waad salaaman tihiin soo dhawaada Jorge 🙂
Kiiskeyga, waxaan ubaahanahay RAM dheeri ah waqti cayiman, maxaa yeelay waa inaan furo kumbuyuutar kumbuyuutar ah (VirtualBox) tanina waa xalka aan ku helay daqiiqadaas gaarka ah, xalka aan la wadaago maxaa yeelay ma aqaano hadii qof kale uu tan ama wax kale 🙂
Waxaan u maleynayaa in si looga takhaluso maktabadaha qaar ee dhexda ku yaal.
Waan tijaabiyey oo waxaan ka soo dhaqaaqay ilaa 400mb oo keyd ah ilaa 124mb.
Hagaag, sida saxda ah waxaan ku guuleysanay inaan kaydino kaydka, hadii markaa markale la buuxiyo, waxay noqon doontaa mid ka mid ah waxyaabaha aan isticmaaleyno una baahan nahay waqtigaas, ka hor inta aynaan helin waxyaabo aynaan u baahnayn. Haddii dib naloogu celiyo? Hagaag, markale ayaan faaruqinay.
Runtii waa waxtar.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa wax sidan oo kale ah:
Way shaqaysaa 😀
Soo dhawayn iyo mahadsanid khadka 😉
Waa maxay nasteexo, waxay la mid tahay inaad culeyska ka qaaddo garbahaaga 😛 haha ​​aad ayaad u mahadsantahay!
Dabcan waa inaad qortaa "sudo su" si aad u gasho xididka haddii kale "rukhsad diidmo" ma muuqan doonto
Carlos A. Lopez dijo
Waad ku mahadsan tahay, qoraalkaagu wax badan buu i caawiyay, si aan uga saaro culeyska xusuusta ee mid ka mid ah mashiinadeyda uu lahaa, hadda samee qoraal si toos ah ugu samee, mahadsanid iyo salaan
Jawaab Carlos A. López
Laga soo bilaabo Linux ee G +, Facebook iyo Twitter;)